Naanị 5% nke ndị ọrụ na-eme micropayments n'ime ngwa | Gam akporosis
Na egwuregwu dị ka Clash Royale na ọtụtụ ndị ọzọ nwere nnukwu ewu ewu, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ihe akpọrọ "Whales" iji nweta nnukwu elele. Ma ọ bụ na ha bụ ndị egwuregwu nwee ike imefu ọtụtụ puku euro nwere niile kpara kaadị nke a egwuregwu ma si otú na-enwe ike inweta uru na egwuregwu. Ihe dị mma n'egwuregwu a bụ na ọ chọkwara nka nke onye ọkpụkpọ ahụ, naanị ihe dị ka ọgụ David busoro Golayat.
Eziokwu anyị nwere bụ na inweta ihe ahụ maka onye agha na egwuregwu site na micropayment abụghị ka anyị siri kee. AppsFlyer duziri ọmụmụ nke a hụrụ ya $ 300 nde ejiri ihe karịrị otu puku ngwa site na 100 nde ndị ọrụ pụrụ iche na ọnwa nke Eprel. N'ime ha niile, naanị pasent 5 nke ndị ọrụ ụwa niile zụrụ site na micropayment na $ 9,60 kwa ọnwa.
Isi ọrụ nke ịzụta si iOS (pasent 7,2 nke ndị ọrụ niile) bụ ukwuu karịa nke gam akporo (Pasent 4,6) ma na-emefu okpukpu abụọ kwa azụmahịa ($ 12,77 ọ bụla na iOS vesos $ 6,19 na gam akporo) na ugboro abụọ na ọkara karịa kwa ọnwa. Eziokwu ọzọ bụ na ndị ọrụ iOS na-etinyekarị ego na ngwa ngwa ịzụ ahịa, ebe ndị ọrụ gam akporo na-ahọrọ ngwa arụmọrụ.
Na Asia ha setịpụrụ ihe ndekọ niile na nkezi nke $ 10,65 kwa zuoỌ bụ ezie na ndị Europe na-eji $ 5,61 na South America ihe ruru $ 4,61. North America na-anọgide na $ 8,68, naanị 12 cents karịa ụwa zuru oke maka ịzụrụ micropayment.
Micfọdụ micropayments anyị na-ahụ n'ọtụtụ egwuregwu vidio dị na Storelọ Ahịa Play mana nke ahụ anaghị eji dị ka anyị nwere ike iche, n'agbanyeghị ee ọ na-enye ndị mmepe ịga n'ihu ịkụ nzọ n'ahịa a. N'aka nke ọzọ, anyị nwere akwụkwọ mmado na ngwa nkata dịka LINE, na-egosi oke ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ná nkezi, ọ bụ naanị 5 pasent nke ndị ọrụ na-eme micropayments na ngwa